I-LDPE cubitainer iyikhiyubhu epulasitiki eqinile, noma isinye, emangele kodwa isaguquguquka futhi kulula ukuyiphatha. ICubitainer ihlala isikhathi eside ngokwanele ukuthi ingasetshenziswa yodwa kepha ingasetshenziswa nebhokisi likathayela elingaphandle ukwakha iphakethe eliqinile nelingacishe libhubhe. Inentambo ehlanganisiwe ukuze i ...
Ukupakisha isikhwama soketshezi sesikhwama se-sanitizer yesandla
Kokubili i-LDPE cubitainer nezikhwama ezimile ziyathandwa ngokugcwalisa insipho yesepha yesandla. Ukupakisha isitsha samanzi esikhwameni sesepha yokuhlanza izandla kuhlangabezana nezidingo ze-FDA nazo zonke izinto zokusetshenziswa ezenza kube yindlela enhle yokugcina amanzi namanye amathuba amaningi. Iziqukathi namabhokisi angama-als ...
I-LDPE cubitainer 5 litre ene-spout ye-gel yezokwelapha ye-ultrasound
Ama-cubitainers ethu e-LDPE adumile ngokugcwalisa ijeli ye-ultrasound yezokwelapha. Amakhasimende ajwayele ukukhetha ispout ukukhipha i-gel. I-LDPE cubitainer ene-spout ye-gel ye-ultrasound yezokwelapha ihlangabezana nezidingo ze-FDA nazo zonke izinto zokusetshenziswa ezenza kube yindlela enhle yokugcina amanzi ...
Izikhwama zokupakisha ze-hypochlorous acid disinfectant
Ithonywe yi-COVID-19, kunesidingo esikhulayo semikhiqizo elwa namagciwane njengesibulala-magciwane notshwala. Kusukela ekuqaleni konyaka ka-2020, imishini yethu isebenza amahora angama-24 nsuku zonke emakethe ye-hypochlorous acid disinfectant notshwala. Sithumela izikhwama ezingaphezu kwama-100000 ngama-t ...
Lo ngumkhiqizo wethu omusha onedizayini entsha yohlobo. Isikhwama senziwe ngepulasitiki enama-multilayer. Isendlalelo sangaphandle (i-polyamide + polyethylene) sivikela umoya-mpilo nomswakama; ukuminyana kwayo nokwakheka kwayo kungahluka kuye ngezidingo zeklayenti noma umkhiqizo. Isendlalelo sangaphakathi (i-polyethylene) sinwebeka ...
Ngokwandayo amakhasimende ethu aqala ukusebenzisa i-cheertainer ukugcwalisa imikhiqizo ewuketshezi. Ngemuva kwalokho, yini umuntu ozijabulayo? Yisiqukathi esisha sokupakisha esihlanganisa ukuguquguquka kwesikhwama ebhokisini nezinzuzo ezithuthukisiwe zemikhiqizo yokupakisha eqinile noma eqinile, eyenza i-cheeratainer ibe yi-alt ephelele ...